ဆောင်ခဲ့တဦးတည်းအိမ်ခေါင်မိုးအောက်မှာကလေးများနှင့်မိတ်ဖက် | ကလေးတွေရှိပါတယ် အကယ်.
ဒါကြောင့်ဖြစ်သင့်သည်အတိုင်းအစအဦး၌, သင်သည်မေတ္တာတရားကိုဆဲပါပဲ, အရာအားလုံးသည်။ Movie, ည, ဖယောင်းတိုင်ညစာနှင့်တနင်္ဂနွေနံနက်ရက်သည်သင်၌အိပ်ပျော်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လိုက်ဖက်စွာမိသားစုစီမံကိန်းပေါင်းစပ်ဘာမှလမျး၌ရပ်။
ဒါပေမယ့်အထူအဆုံးနိဂုံးပိုင်းမှကြွလာ: အငယ်တန်းမွေးဖွားခဲ့သည်ပြီးနောက်ကွာခဏတစ်ဦးကြားဆက်ဆံရေးအထူးသဖြင့်ပထမဦးဆုံးနှစ်, ပျက်ကွက်မဟုတ်။ မကြာခဏပိုပြီးသံသယအပြင်ကလူထက်လူငယ်စုံတွဲကိုထည့်လေ့မရှိအားလုံးသောကလေးများ squabbling, အော်ဟစ်အိည။ ထိုအသေးအားလုံးသူတို့ထဲကအမြိုးသားအသေးငယ်သည့်အခါအချိန်, အလှဆုံး၏တဦးတည်းကဆိုသည်ပါပြီ။
တစ်ဦးကကလေးငယ်ကိုတာဝန်ယူဆိုလိုသည်။ ဒါဟာငယ်ရွယ်မိသားစုနှောင့်အယှက့်ဘဏ္ဍာရေးအမှုအရာမဟုတ်ဘူး။ ကလေးငယ်တစ်ဦးရှိခြင်းသည်လည်းဆက်ဆံရေးအတွက်ပြောင်းလဲသွားတယ်သင့်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်။ ရုတ်တရက်သင်တို့သည်နောက်တဖန်မယ့်ရည်းစား / ရည်းစားသို့မဟုတ်ခင်ပွန်း / ဇနီးပါပဲ, ဒါပေမယ့်မိခင်သို့မဟုတ်ဖခင်နှင့်အရှင်သည်အခြားတာဝန်များကိုရှိပါတယ်။
လူကိုယခုသူ၏ဇနီးနှင့်ကလေးများအတွက်ပေးရမညျ, အိမ်မှာထိုအမြိုးသမီးနေဆဲဖြစ်သည်။ အတော်များများကယောက်ျားသည်ယနေ့မရှိတော့မတိုင်မီသကဲ့သို့ဘုံဖြစ်ပါတယ်အလုပ်တစ်ခုအဖြစ်ဖိအားအောက်တွင်ဤအသိပညာတတ်၏။ ထိုမိန်းမသည်, သို့သော်, သူတို့ရဲ့သူငယ်၏စောင့်ရှောက်မှုလုံးဝမြှုပ်နှံတစ်ခုသို့မဟုတ်အချို့သောအချိန်ပြီးနောက်ပြန်အလုပ်ကိုသွားဖြစ်ပါတယ်ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်နှင့်ဤမျှကာလပတ်လုံးတစ်ဦးနွားစားခွက်ထဲတွင်သူငယ်အိမ်များရမည်ဖြစ်သည်။
ဒါကြောင့်ပဲငယ်ရွယ်အဲဒီမှာဖြစ်ဖို့မဆုံးဖြတ်ခဲ့လျှင်သူတို့၏ယခင်ဝိသေသလက္ခဏာတစ်ဖဲ့ကိုရခြင်းယဇ်ပူဇော်ကြ၏နှင့်လုံးဝအခြေအနေသစ်အတွက်ကိုယ်ကိုကိုယ်တွေ့။ မဟုတ်ကိုအမြဲအရာအားလုံးငယ်ရွယ်မိခင်ဟာသူတို့ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုအတွက်ပျော်ရွှင်ခံစားရရင်တောင်ဒီအချိန်မှာ rosy ဖြစ်ပါတယ်။ သင်မှန်သမျှကိုပြုကြနှင့်လည်းဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲတိုင်းပြည်အတွက်နောက်တဖန်အချိန်ပါစေနှင့်ရှိမရှိအဖြစ် colic ဒါမှမဟုတ်ပထမဦးဆုံးအသွားများ, သင့်လက်တွဲဖော်နှင့်အတူစိတ်ဖိစီးမှုသည်မသေချာမရေရာအဘို့ကလေးငိုတာရှည်ည။
လောလောလတ်လတ်ဖုတ်အဘ၏နေ့စဉ်ဘဝမိခင်၏အဖြစ်အလေးအနက်မပြောင်းပါဘူး။ ထို့နောက်သူသည်အိမ်ပြန်လာ, သို့သော်, သူတစ်ဦးကောင်းတဲ့ "ခဲ့ပုံကိုမင်္ဂလာပါ Darling,! သင့်ရဲ့နေ့ 'ကိုကြိုဆိုပေမယ့်အကောင်းဆုံးဝေဖန်သုံးသပ်ချက်ကသူ၏အလွန်ဒေါသထွက်လာတဲ့ဇနီး၏လက်ရုံးထဲသို့လူငယ်တွန်းရစေခြင်းငှါသာမရှိသလောက်ဖြစ်ပါတယ်။
အစဉ်အဆက်ယခင်ကသူ့ကိုလုံးဝပြောင်းလဲပြီမှသာဂရုစိုက်သူအမျိုးသမီးတစ်ဦးကသူ့မျက်စိထဲမှာပုံရသည်။ အမျိုးသားများအတွက်မကြာခဏငယ်ရွယ်ပင်မနာလိုတုံ့ပြန်။ အဆိုပါကလေးသည်ပထမဦးဆုံးအရပ်ပေါ်မှာအခုဆိုရင်ဖြစ်ပါသည် - ဒါကြောင့်ကလေးတွေစုံတဲ့တိုင်အောင်မကြွင်းပါလိမ့်မယ်။
ဤလူငယ်သည်ဘိုးဘေးတို့ရန်အသုံးပြုခဲ့ကြသဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်သည်။ ဒါဟာသည်းခံခြင်း, ရဲစွမ်းသတ္တိနှင့်သည်းခံစိတ်ကောင်းတစ်ခုထိုးတွေအများကြီးလိုအပ်တယ်, ဒါကြောင့်အိမ်ထောင်ရေးကျရှုံးပါဘူး။ အနည်းငယ်စုံတွဲများသုံးပတ်ပြီးနောက်ညဥ့်မှတဆင့်အိပ်ပျော်သောကလေးများရှိသည်!
အချိန်ပြီးနောက်တဦးတည်းအများအားဖြင့်ပိုပြီးသို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းသည်သူ၏အခန်းကဏ္ဍသစ်၌တွေ့ကြောင့်နောက်တစ်ကြိမ်တစ်စုံအဖြစ်သူ့ဟာသူကြမယ်, ရန်လိုအပ်သောကြောင်းလက်ခံခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့်, အားလုံးငယ်ရွယ်မိခင်နှင့်ဘိုးဘေးတို့သသင့်ပါတယ်မှန်မှန် - ရှေးဦးစွာ မှစ. နှင့်အကောင်းဆုံး - အတူတူတနေရာဆက်ဆံပါ။ ကျနော်တို့ပိုကောင်း, တစ်လတခါကလေးထိန်းများပင်နှစ်ကြိမ်အခန်းကဏ္ဍကျော်ယူသူအဘိုးအဘွားရှိပါတယ်ရေတွက်ပြီး။ ဤအ site ပေါ်တွင်အသက်ရှင်နေထိုင်မထားဘူးဆိုရင်, သင်စက်ဝိုင်းပတ်ပတ်လည်ကိုမေးလို့ရပါတယ်။ အကယ်စင်စစ်တစ်စုံတစ်ဦးကများလွန်းစျေးကြီးမဟုတ်သောအရာတစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချကလေးထိန်း, သိတယ်။
ဒါမှမဟုတ်ငယ်ရွယ်မိသားစုများအပြန်အလှန်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားထောကျပံ့ပေး။ ကလေးအပြီးကြည့်ရှုရန်အရပ်ကွက်အတွင်းကနေမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်လည်းတစ်စုံတစ်ဦး။ အပေါ်ကဒီမှာမဆိုအကူအညီတောင်းယူပါ! ဒီဘုံအချိန် မှစ. , မိတ်ဖက်ရေရှည်မှာအကျိုးရှိမည်။
တစ်ဦးပူးပေါင်းလူတိုင်း, ငယ်ရွယ်ပေမယ့်လည်းသူ့ကိုယ်ပိုင်ဝါသနာများအတွက်အချိန်ရှိသည်သငျ့သညျ။ တဦးတည်းကသူ့ဝါသနာကိုလိုက်ရှာနေစဉ်ခန္ဓာကိုယ်စိတ်ဖိစီးမှုလျော့နည်းစေနှင့်သင့်ဘက်ထရီအားသွင်းနိုင်သောကြောင့်ဒီမှာမိတ်ဖက်, ဖြည့်ဆည်းရပါမည်။ တူညီတဲ့သူငယ်ချင်းများကိုသက်ဆိုင်သည်။ မကြာခဏရှည်တည်မြဲမိတ်အဆွေသူတို့ကိုယ်သူတို့နေဆဲကလေးများရှိသည်နှင့်သင်အချိန်ကြာမြင့်စွာမခေါ်မှညအချိန်တွင်လည်းပင်ပန်းအခါနားမလညျနိုငျပါ, အထူးသဖြင့်သောအခါ, မိဘများ၏အချိန်မရှိခြင်းကနေခံစားနေကြရသည်။
တနည်းကား, Fixed ကြိမ်စီစဉ်ထားသည်။ တစ်ဦးက "ကျွန်တော်တို့အမှန်ပင်ကြိမ်တနေ့ပြန်တွေ့နိုင်ပါတယ်" ဘယ်သူမှကူညီပေးသည်။ ရုံသူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူစည်းဝေးနှင့်ဝါသနာမြောကျမတို့မကြာခဏဟာသိပ်တိုတောင်းပါတယ်လာ, တကနည်းနည်းကသူ၏ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာပြန်ဤနေရာတွင်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ လူငယ်တစ်ဦးကမိသားစုများ၏အကြီးအအနုပညာ, ထို့ကြောင့်လည်းကျွန်းများကိုဖန်တီးရန်နှင့်ဤအရပ်၌သင်၏ဘက်ထရီအားသွင်းဖို့ပူဇော်ဖို့မမေ့နိုင်သောယခုအချိန်တွင်သူအလုပ်များလူနေမှု, ဘေးတွင်တည်ရှိသည်။
ရှိသမျှသောအချည်းနှီးသို့မဟုတ်လွန်းနည်းနည်းအချိန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်, တကပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကူအညီဖြင့်ရရှိရန်အသုံးဝင်သောဖြစ်နိုင်သည်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများမကြာခဏကြောင်းအခြေခံပြဿနာအလင်းမှကြွလာသည့်အကြောင်းမရှိအူဘယ်မှာလက်ထပ်ထိမ်းမြားအကြံပေးခြင်း, ကိုဆက်ကပ်။ အဆိုပါအားလုံးအတွက်သင်တန်းသူ့ဟာသူအလုပ်လုပ်ကြသည်။ သို့သော်အဘယ်သူကိုမှသူ၏ဆကျဆံရေးတန်ဖိုးတစ်ခုခုဖြစ်ပါတယ်ရမယ်, နေ့စဉ်အသက်တာ၏ blinders ဖုံးကွယ်ခြင်းနှင့်မဖယ်ရှားသင့်ပါတယ်။ သောကြောင့်သင်တန်း၏, အပြစ်တင်ဖို့ပြဿနာများ၏အနွယ်ပေမယ့်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်မိဘများများ၏စွမ်းရည်မဟုတ်ပါဘူး။
ကတိကဝတ်ကိစ္စများ | ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း
လိင်တူဆက်ဆံရေး | မိတ်ဖက်ထွက်လာမယ့်